Baolina kitra - CAN 2012 : Mikendry ady sahala farafaharatsiny ny Barea
Mpilalao tanora nohatevenina zokiny dimy no hoentin’i Frank Rajaonarisamba hiarovana ny voninahitr’i Madagasikara etsy Mahamasina rahampitso mandritra ny fihaonantsika amin’ny Super Eagles avy any Nizeria.
Isan’ireo zokony mbola tavela ao amin’ireo 18 lahy hamenoana ny taratasin-dalao ry Robin (Ascum), Ndrasana (AS Adema), Aoulad (Japan Actuel’s), Yvan (Cnaps) sy Boto (Japan Actuel’s). "Noho ny faharatrana teo amin’ireo mpilalao zandriny maromaro no tsy maintsy notazonana azy ireo", hoy i Frank Rajaonarisamba, mpanazatra ny Barea latsaky ny 23 taona. Isan’ireny ry Tahiana sy Nonot (Cnaps) Pierralit (Ajesaia), izay tsy tafiditra anatin’ny 18 lahy.
Miomana amin’ny paikady manafika hatramin’ny farany ny Barea, araka ny nambaran’ny mpanazatra azy ireo.
"Na izany aza dia hiverina ny hiaro tena amin’ny fotoana tokony hanaovana izany ary ny valim-panafihina sy ny fanafainganana ny lalao no hifandimbindimby eo", hoy ihany izy.
Fanomanana sahady an’ireo mpilalao latsaky ny 23 taona ho amin’ny lalao iraisam-pirenena ity hotontosaina ity, ka nahasarika azy ireo hiangavy amin’ireo mpijery ny mba "hanomezana fahafahana mampiseho ny tena fahaizan’ny tsirairay sy ny ekipa fa tsy ho valiana tsikera be fahatany na ihany koa akoralava amin’ny fahitana fahadisoana kely ataon’izy ireo".
Misy amin’ireo mpilalao ireo rahateo no vao sambany hiatrika lalao iraisam-pirenena etsy Mahamasina toa an-dry Dafé sy Mario. Efa tsy ao anaty hazakazaka intsony rahateo isika amin’ny fifanitsanana ho an’ny Can 2012 saigy lalao tsy maintsy atao izy ity.